Brisbane bụ Queensland isi obodo na-agọzi A-ndepụta nkiri dị ka Oké Osimiri World, ezi lawns na ubi nke South Bank, na Akụkọ akwa, na ọtụtụ ndị ọzọ - Australia’s fọdụrụ n'ezinụlọ cantilever akwa.
Ọ bụ na-a okike obodo, na art ngosi ihe mgbe ochie na veranda na chic cafes aplenty, plus ọ bụ nke zuru okè rata maka Gold Coast osimiri, oké osimiri, na sọfụ.
na 21 Kilomita ogologo, ọ ga na-eje ozi 18 ọdụ ụgbọ obodo niile, na bi na njem nleta myiri ga-enwe ike hop na na dị ka ha na-amasị.
Ipswich dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke obodo Brisbane na ọ bụ ebe ị ga-ahụ ọmarịcha Ọzụzụ Railway Workshops..
Brisbane ọdụ ụgbọ bụ a ọrụ n'aka iga ehiwe nke ahụ na-sikwuo site cafes ka Fonzie Abbot, Ogwe dị ka Transit Tavern, na adọba ụgbọala na enye dị ka Looking4.com.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-brisbane-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)